Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-teraka ao amin'ny saha Annie Adams | Abby Wambach sy Sarah Orne Jewett | Glennon Doyle: mpivady lesbiana dia miara-teraka indray amin'ny mpivady lesbiana indray, mampiseho ny fandaminana ny androm-piainana sy ny fikirizanana amin'ny fanoratana talenta mandritra ny androm-piainana. - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Tamin'ny fihaonany voalohany, Glennon Doyle sy Abby Wambach dia nanaiky ny fifandraisana Emotional avy hatrany
Nijery fandaharana tamin'ny fahitalavitra iray nahitana mpanoratra aho Glennon Doyle ary kintan'ny baolina kitra Abby Wambach, izay mpanoratra be mpividy indrindra koa. Glennon sy Abby dia mpivady lesbiana, na dia nanambady lehilahy iray aza i Glennon teo aloha, izay nanan-janaka.
Nandritra ny resadresaka nifanaovana taminy dia nanontaniana izy mivady hoe ahoana no fomba nihaonan'izy ireo. Nilaza i Glennon fa tao amin'ny hetsika fampahafantarana boky tao amin'ny Palmer House any Chicago izy. Tao amin'ny efitrano kely iray ambadika izy nipetraka teo ambony latabatra niaraka tamin'ny mpanoratra hafa miandry ny hanombohan'ny programa.
Abby, izay nandray anjara tamin'ilay hetsika ihany koa, dia nanokatra ny varavaran'ny efitrano. Nibanjina an'i Abby i Glennon ary nanaitra azy ny endrika ivelany. Nilaza i Glennon fa nitsangana tsy nahatsiaro tena izy ary naninjitra ny tanany nanatona an'i Abby, toy ny hoe nihetsika irery ny vatany ho fankasitrahana an'i Abby.
Tamin'izay fotoana izay ihany dia naheno tao am-pony i Glennon: “Any Izy.” Toa an'i Glennon fa efa niandry an'i Abby tamin'ny androny rehetra izy.
Abby sy Glennon dia niara-nandeha an-tsehatra ary rehefa nanao izany dia nokasihin'i Glennon ny sandrin'i Abby. Nilaza i Abby fa ny fikasihan'i Glennon dia toy ny tselatra fankasitrahana. Lasa mpivady lesbiana nanambady izy ireo.
Jereo ny tafatafa: Glennon Doyle sy Abby Wambach dia mamaritra ny fanekena eo noho eo amin'ny fihaonana voalohany
Walter dia manaiky ny fifandraisana taloha sy ny fanarahana ny fanarahana ny fizarana tamin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson
Rehefa nahita an'ity tantara ity tamin'ny fahitalavitra aho dia nahita ny fahatsiarovako fa mpivady i Glennon sy Abby nandritra ny androm-piainana taloha, satria izany dia hanazava ny fiarahan'izy ireo nifankahita.
Nandritra ny fotoam-pivoriana niarahana tamin'ny medium medium Kevin Ryerson dia nanazava ny toe-javatra tamin'i Ahtun Re aho, ilay mpitarika fanahy nampitaina tamin'i Kevin izay naneho ny fahaizany manao lalao taloha miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta. Nangataka tamin'i Ahtun Re aho mba hamantatra ny fiainana taloha ho an'i Glennon sy Abby izay mpivady.
Tahaka ny fanaony dia hoy i Ahtun Re, "Fotoana iray." Nisy fe-potoana fahanginana taorian'izay, ary nandritra ny fotoana nandehanan'i Ahtun Re tamina fanjakana misaintsaina hitady izany vaovao izany. Rehefa afaka iray na roa minitra dia niverina i Ahtun Re ary nilaza tamiko manokana tsara:
“Mpivady lesbiana antsoina hoe Annie Adams Fields ary Sarah Jewett, izay samy mpanoratra vehivavy tamin'ny 19 taonath taonjato."
Tsy mbola naheno vehivavy aho, fa rehefa nanao fikarohana kely dia hitako fa nisy izy ireo, dia mpanoratra amerikanina sy mpivady lesbiana.
Tsapako fa io dia endri-javatra mahavariana tamin'ny lalao taloha. Aza adino fa tadidiko fa tsy ampahafantariko an'i Kevin mialoha ny fotoam-pivorianay izay ho fanontaniako, noho izany dia tsy manana fotoana hanaovana fikarohana mialoha izy. Gaga foana aho tamin'ny fahaizan'i Ahtun Re naka fiainana taloha.
Tranga Reincarnation an'ny mpanoratra
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny fiasa amin'ny endrik'i Annie Adams Fields sy Abby Wahbach dia mitovy, toy ny itovizan'ny fisehoan'ny Sarah Orne Jewett sy Glennon Doyle.
Rehefa mampitaha ny sarin'i Sarah sy Glennon amin'ny fakantsary 45 degre amin'ny fakantsary, amin'ny fahitana ny mombamomba azy, dia mampitolagaga ny fitoviana.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Ny talenta fanoratana dia ampitaina mandritra ny androm-piainany iray hafa amin'ny roa amin'ireo tranga reincarnation roa ireo.
Kintana baolina kitra i Abby Wambach, na dia tsy fantatra amin'ny fahaizany ara-panatanjahan-tena aza i Annie Adams Fields. Mety ho i Annie no nanana io fironana io, saingy tamin'ny 19th taonjato, ny vehivavy dia tsy namporisihina na navela hanao fanatanjahantena fifaninanana.
Fandrafetana ny androm-piainana sy ny fanavaozana ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao: Mpivady lesbiana miaraka miaraka amin'ny nofo indray, mampiseho fa ny fanahy dia mandrindra ny androm-piainany ary misy fiantraikany amin'ny fizotry ny fitondrana vohoka mihitsy aza, hiaraka amin'ireo olon-tiany sy niaraka taminy taloha. Raha te hahalala bebe kokoa dia mankanesa any:
Fianarana kambana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao Ian Stevenson